Ukubuka umthi we-Peepal kufutshane ne-IISc, i-Ramaiah, i-WTC - I-Airbnb
Ukubuka umthi we-Peepal kufutshane ne-IISc, i-Ramaiah, i-WTC
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguPraveen
I-90% yeendwendwe zakutshanje inike uPraveen iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Abahambi abafuna ukuya kwi-IISc, isibhedlele saseRamaiah, i-BEL Road, i-Palace grounds, iMG Road, i-BIEC bahlala behlala kwindawo yam. Eli likhaya elincinci elicocekileyo elicocekileyo kwindawo yokuhlala enoxolo, kufutshane nazo zonke izinto eziluncedo. Isikhululo seenqwelomoya sikumgama nje wemizuzu engama-40. Iindawo zokutyela, iivenkile zokutyela, iivenkile ezinkulu kunye nesibhedlele zingaphantsi kwemizuzu emi-5 ngokuhamba.
Ndiyakholelwa ukuba nanini na xa usiya kwindawo ekude nekhaya okanye kude nendawo oyiqhelileyo, kukunika ithuba elihle lokuzihlola, ukubuyisela umva kwaye ukhuphe i-humdrum yemihla ngemihla kunye noxinzelelo. Ndikwakholelwa ukuba amagumbi ehotele ahlala ekugqume kwihlabathi elingenazintsholongwane, elifana nelinye kwaye elingenamvakalelo. Ndingathanda nina, zindwendwe zam ukuba nibe namava obomi ngokwahlukileyo xa nihlala nakweyiphi na indawo endiye ndaziguqulela kumakhaya afakwe inkcubeko kunye nomoya wase-Bangalore. Uya kufumana amakhaya am onwabile kwaye amkelekile ngokukhanya okuninzi kwendalo. I-Peepal tree view (ethiywe ngomthi omhle kakhulu ojongene nekhaya) iziswe kum kunye notata wam ukuba ikuyo ngoku. Ilula, iyasebenza kwaye inobuhle. Amakhaya am ayiyondawo yokugcina ifanitshala engafunekiyo kunye nokuhombisa okungenangqondo. Icandelo ngalinye likhethwe ngononophelo kwaye lithengiwe njengokuba umntu ebeya kwenza kwikhaya ahlala kulo kwaye alithandayo. Ndibuze kwaye ndiza kuvuya ukukuxelela ibali lendlela endiyibeke ngayo.
Kukho isitalato sokutya esijikeleze ikona apho unokufumana iindidi ezininzi zokutya zesitrato ngeengokuhlwa. Ubumelwane buluhlaza nemithi emininzi. Le yindawo yasekhaya kwaye uya kufumana abantwana bedlala esitratweni ngokuhlwa. Uya kuba ngumbukeli kwisiqwenga sobomi esikhumbuza i-Bangalore yakudala.
Ndihlala kufutshane kakhulu kwaye ndiya kukuvuyela ukukunceda ekucwangciseni uhambo lwakho okanye ukukunceda ngayo nayiphi na enye into kangangoko ndinako.